NUG ပရိုဖိုင် ဖရိန်ချိန်းထားတဲ့ ဖေ့ဘုတ်အကောင့်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ထုတ်ဖော်ပြောလာတဲ့ နန္ဒာလှိုင်ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ဦးဇေသီဟ – Sport Gaber
NUG ပရိုဖိုင် ဖရိန်ချိန်းထားတဲ့ ဖေ့ဘုတ်အကောင့်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ထုတ်ဖော်ပြောလာတဲ့ နန္ဒာလှိုင်ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ဦးဇေသီဟ
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ…နိုင်ငံကျော်ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချောနန္ဒာလှိုင်ဟာဆိုရင် ပရိသတ်တွေချစ်ခင်အားပေးရတဲ့နိုင်ငံကျော်အနုပညာရှင်တစ်ဦးပါ။သူမသရုပ်ဆောင်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားများစွာရှိတာကြောင့် သူမကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်အခိုင် အမာရရှိထားသူပါ။အောင်မြင်မှုများစွာရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ သူမကခုဆိုရင်သူမ
ချစ်တဲ့မိသားစုလေးနဲ့ ဘဝကိုအေးချမ်းစွာဖြတ်သန်းနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။မကြာခင်ရက်ပိုင်းတွေတုန်းကတော့ ဦးဇေသီဟတို့မိသားစုကတော့ အောက်ဆီဂျင်တွေလှူမယ်ဆိုပြီးအလုပ်တွေရှုတ်နေခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခုတစ်လောပြည်သူတွေက Bank တွေနဲ့ပက်သက်လို့ ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပက်သက်လို့ “KBZ Pay မှာရှိတဲ့အကောင့်တွေ အပိတ်ခံရတာ တကယ်က KBZ နဲ့ ဘာမှ မဆိုင်ဘူး။
သတင်းပေးတဲ့သူက သတင်းပေးတယ်။ အဲ့ဒီသတင်းအရ စာထုတ်ပြီး နာမည်စာရင်းနဲ့ ပိတ်ခိုင်းတယ်။အဲ့တော့ ပိတ်ပေးရတယ်။ ဘဏ်ရဲ့သဘောအရ Black list ဝင်သွားတဲ့အကောင့်ဆို ပိတ်ပေးရတာ ဒီနိုင်ငံမှာတင်မဟုတ်ဘူး နိုင်ငံတကာမှာလဲ ဒီအတိုင်းပဲ။နိုင်ငံတကာက ဘဏ်တိုင်းလဲ အထက်က ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်း လုပ်ရတာပဲ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် KBZ Pay ကို rating ကျအောင် လုပ်ချင်ကြတယ်။ လုပ်ပါ။ ထိရောက်သလား။rating ကျတဲ့အတွက် လုပ်ငန်းသစ်ဆိုရင်တော့ ထိခိုက်မှု ရှိပါတယ်။ အရှိန်ရနေတဲ့ လုပ်ငန်း၊ ဘဏ်လောကရဲ့ ထိပ်ဆုံးနေရာ ရောက်နေတဲ့ လုပ်ငန်းအတွက် ဘာမှ အကျိုးမထူးဘူး။
မထိရောက်ဘူးလို့ ဆိုလိုချင်တာ။ သူ့ရဲ့ လက်ရှိ customer က သန်းပေါင်းများစွာရှိတယ်။ လူ ၅ သောင်းကျော် rating ချပြီး သူ့အကောင့်ကို မသုံးတာ သိပ်မထူးပါဘူး။မလိုအပ်တဲ့ နေရာမှာ အင်အားကို ဖြုန်းနေကြလို့ ပြောတာပါ ညီတို့ရေ။KBZPay play store မှာ rating ချပြီးလဲ ငွေကြေးအမြတ်အစွန်း လျော့သွားမှာ မဟုတ်ဘူး။
လိုအပ်တဲ့သူက၊ သူ့ကို မဖြစ်မနေ အသုံရပြုနေရမဲ့လူကတော့ သုံးနေအုံးမှာပဲ။ ဒုတိယတစ်ခုက မိတ်ဆွေကောင်းအလုပ်ကြီးကြီးလုပ်သူတိုင်း အပေါင်းအသင်း များများလိုပါတယ်။ရန်သူ နည်းအောင် ကြိုးစားရပါမယ်။ ရန်သူဖြစ်ရင်တောင်မိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားရပါမယ်။
NUG တံဆိပ် ကပ်ထားတဲ့သူတွေကို အချင်းချင်း ပြန်ဆဲတာကိုယ့်အင်အားကို ကိုယ်ချည့်နဲ့အောင် လုပ်သလိုပါပဲ။ nug profile ပြောင်းတဲ့သူတွေက မင်းတို့ကို ယုံပြီးသားလူတွေပါ။ပြန်သုံးသပ်ပါ။အချိန် ခွန်အား ငွေကြေး နဲ့ မိတိဆွေကောင်း စတဲ့ အရာအားလုံးဟာ အကန့်အသတ် ရှိနေပါလျက်နဲ့ ဖြုန်းတီးပစ်နေမယ်
ဆိုရင်တော့”…လို့ရေးသားလာတာ ဖြစ်ပါတယ်. .. သူ့ရဲ့ပို့်စ်အောက်မှာတော့ အမြင်မတူသူတွေရဲ့ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ပွဲစည်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးရော ဘယ်လိုထင်လဲဆိုတာ ဝေဖန်ပေးခဲ့ပါအုံးနော်..
NUG ပရိုဖိုငျ ဖရိနျခြိနျးထားတဲ့ ဖေ့ဘုတျအကောင့ျတှနေဲ့ပတျသကျပွီး ထုတျဖောျပွောလာတဲ့ နန်ဒာလှိုငျခငျပှနျးဖွဈသူ ဦးဇသေီဟ
ပရိတျသတျကွီးရေ…နိုငျငံကြောျရုပျရှငျသရုပျဆောငျ မငျးသမီးခြောနန်ဒာလှိုငျဟာဆိုရငျ ပရိသတျတှခေစြျခငျအားပေးရတဲ့နိုငျငံကြောျအနုပညာရှငျတဈဦးပါ။သူမသရုပျဆောငျရိုကျကူးခဲ့တဲ့ဇာတျကားမြားစှာရှိတာကွောင့ျ သူမကိုခစြျတဲ့ပရိသတျအခိုငျ အမာရရှိထားသူပါ။အောငျမွငျမှုမြားစှာရရှိပိုငျဆိုငျခဲ့တဲ့ သူမကခုဆိုရငျသူမ
ခစြျတဲ့မိသားစုလေးနဲ့ ဘဝကိုအေးခမြျးစှာဖွတျသနျးနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။မကွာခငျရကျပိုငျးတှတေုနျးကတော့ ဦးဇသေီဟတို့မိသားစုကတော့ အောကျဆီဂငြျတှလှေူမယျဆိုပွီးအလုပျတှရှေုတျနခေဲ့ကွတာ ဖွဈပါတယျ။ ခုတဈလောပွညျသူတှကေ Bank တှနေဲ့ပကျသကျလို့ ဖွဈနတေဲ့ကိစ်စတှနေဲ့ပကျသကျလို့ “KBZ Pay မှာရှိတဲ့အကောင့ျတှေ အပိတျခံရတာ တကယျက KBZ နဲ့ ဘာမှ မဆိုငျဘူး။
သတငျးပေးတဲ့သူက သတငျးပေးတယျ။ အဲ့ဒီသတငျးအရ စာထုတျပွီး နာမညျစာရငျးနဲ့ ပိတျခိုငျးတယျ။အဲ့တော့ ပိတျပေးရတယျ။ ဘဏျရဲ့သဘောအရ Black list ဝငျသှားတဲ့အကောင့ျဆို ပိတျပေးရတာ ဒီနိုငျငံမှာတငျမဟုတျဘူး နိုငျငံတကာမှာလဲ ဒီအတိုငျးပဲ။နိုငျငံတကာက ဘဏျတိုငျးလဲ အထကျက ညှှနျကွားတဲ့အတိုငျး လုပျရတာပဲ။
ဘာပဲဖွဈဖွဈ KBZ Pay ကို rating ကအြောငျ လုပျခငြျကွတယျ။ လုပျပါ။ ထိရောကျသလား။rating ကတြဲ့အတှကျ လုပျငနျးသဈဆိုရငျတော့ ထိခိုကျမှု ရှိပါတယျ။ အရှိနျရနတေဲ့ လုပျငနျး၊ ဘဏျလောကရဲ့ ထိပျဆုံးနရော ရောကျနတေဲ့ လုပျငနျးအတှကျ ဘာမှ အကြိုးမထူးဘူး။
မထိရောကျဘူးလို့ ဆိုလိုခငြျတာ။ သူ့ရဲ့ လကျရှိ customer က သနျးပေါငျးမြားစှာရှိတယျ။ လူ ၅ သောငျးကြောျ rating ခပြွီး သူ့အကောင့ျကို မသုံးတာ သိပျမထူးပါဘူး။မလိုအပျတဲ့ နရောမှာ အငျအားကို ဖွုနျးနကွေလို့ ပွောတာပါ ညီတို့ရေ။KBZPay play store မှာ rating ခပြွီးလဲ ငှကွေေးအမွတျအစှနျး လြော့သှားမှာ မဟုတျဘူး။
လိုအပျတဲ့သူက၊ သူ့ကို မဖွဈမနေ အသုံရပွုနရေမဲ့လူကတော့ သုံးနအေုံးမှာပဲ။ ဒုတိယတဈခုက မိတျဆှကေောငျးအလုပျကွီးကွီးလုပျသူတိုငျး အပေါငျးအသငျး မြားမြားလိုပါတယျ။ရနျသူ နညျးအောငျ ကွိုးစားရပါမယျ။ ရနျသူဖွဈရငျတောငျမိတျဆှကေောငျးဖွဈအောငျကွိုးစားရပါမယျ။
NUG တံဆိပျ ကပျထားတဲ့သူတှကေို အခငြျးခငြျး ပွနျဆဲတာကိုယ့ျအငျအားကို ကိုယျခညြ့ျနဲ့အောငျ လုပျသလိုပါပဲ။ nug profile ပွောငျးတဲ့သူတှကေ မငျးတို့ကို ယုံပွီးသားလူတှပေါ။ပွနျသုံးသပျပါ။အခြိနျ ခှနျအား ငှကွေေး နဲ့ မိတိဆှကေောငျး စတဲ့ အရာအားလုံးဟာ အကန့ျအသတျ ရှိနပေါလကြျနဲ့ ဖွုနျးတီးပဈနမေယျ
ဆိုရငျတော့”…လို့ရေးသားလာတာ ဖွဈပါတယျ. .. သူ့ရဲ့ပို့ျဈအောကျမှာတော့ အမွငျမတူသူတှရေဲ့ဝဖေနျမှုတှနေဲ့ပှဲစညျနပွေီဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျကွီးရော ဘယျလိုထငျလဲဆိုတာ ဝဖေနျပေးခဲ့ပါအုံးနောျ..
သားဖြစ်သူရဲ့ မွေးနေ့မှာ အတူရှိနေပေးချင်သော်လည်း.. အဝေးကနေပဲ စိတ်မကောင်းစွာ ဆုတောင်းပေးလိုက်ရရှာတဲ့ ကိုပေါက်
တောထဲမှာ အာဏာရှင်ကိုလက်နက်ကိုင်ပြီးတော်လှန်နေတဲ့ MRTV 4သရုပ်ဆောင်ဟိန်းထက်